“Uma maleynayo inay jirto, rajo ay Liverpool ugu soo laaban karto garoonka Anfield” – Mourinho – Gool FM
“Uma maleynayo inay jirto, rajo ay Liverpool ugu soo laaban karto garoonka Anfield” – Mourinho
Dajiye May 4, 2019
(Yurub) 04 Maajo 2019. Macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa falanqeeyay guuldaradii 3-0 ahayd ee Liverpool ka soo gaartay kooxda Barcelona kulankii lugta hore wareega afar dhamaadka tartanka Champions League, kaasoo ay ku ciyaareen Arbacadii garoonka Camp Nou.
Wargeyska Evening News ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Natiijada 3-0 waa mid aad u weyn, Barcelona waxay u muuqataa inay ku go’aamisay u gudbida wareega xiga garoonkeeda Camp Nou”.
“Uma maleynayo inay jirto, rajo ay Liverpool ugu soo laaban karto garoonka Anfield, taasi waxay suuragal noqon lahayd hadii uusan Lionel Messi dhalin lahayn goolka saddexaad”.
“Way adag tahay in Liverpool ay dhaliso 3 gool, isla markaana aysan la kulmin wax gool ah 90-ka daqiiqo, gaar ahaan qaab ciyaareedka cajiibka ah uu sameenayo Lionel Messi, hadii ay dhaliso Barcelona gool, waxay ka dhigan tahay in Liverpool ay u baahan tahay inay dhaliso 5 gool si ay u soo gudubto”.
“Liverpool waa koox aad u fiican, way adag tahay inaad kula ciyaarto garoonkooda, lakiin hadii laga dhaliyo hal gool kaliya, waxay meesha ka saari doontaa rajadooda”.
Tababare Solskjær oo sharaxaad ka bixiyay mustaqbalka Juan Mata ee kooxda Manchester United
Mohamed Salah oo dhaawac looga saaray garoonka kulanka kooxdiisa Liverpool ay iminka la ciyaareyso Newcastle United... + SAWIRRO